Nin ka tirsanaa Burcad badeeda Soomaalida oo lagu dilay Dhuusamareeb. – SBC
Nin ka tirsanaa Burcad badeeda Soomaalida oo lagu dilay Dhuusamareeb.
Posted by editor on April 27, 2011 Comments
Dhuusamareeb- Ninkan oo ka tirsanaa Burcad badeeda Soomaalida ee ku sugan gobolka Galgaduud ayaa manta lagu toogtay gudaha Degmada Dhuusamareeb iyadoona qaarka hore ay kaga eegteen rasaas kooxo ka koobnaa 2 nin.
Ninkan la dilay islamarkaana la sheegay in uu ka mid ahaa Burcad badeeda ayaa waxaa lagu magacaabaa Maxamed Cusmaan Abtidoon islamarkaana ku magacdheer Tooxow, waxaana uu ku geeriyooday isbitalka Dhuusamareeb ka dib markii la gaarsiyay isagood haawac ah .
Ciidamada Amaanka ee Deg Dhuusamareeb ayaa Xabsiga u taxaabay 2dii nin ee iyagu geystay falkan dilka ah, iyagoona laga qaaday qoryihi ay wateen,
Sikastaba h ahaaatee mudooyinkan dambe ayaa waxaa ku soo kordhayay magaalada Dhuusamareeb iyo deegaamada ku xeeran falalka qorsheysan oo loo geysanayo dad iyagu bartilmaameed ah.
Waxay aheyd markii bishan sii dhamaneysa horaanteeda lagu dilay gudaha Dhuusamareeb nin isagu nabad doon ahaa oo uu dilkaasi u geystay nin isago ka baxsaday ciidanka Police-ka, markii ay damceen in ay qabtaan ka dib marka uu falka geystay.